ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Hebei Moyo Technologies Co. , Ltd.
TAB အထပ်သည် Beijing-Guangzhou အမြန်လမ်း၊ Tianjin ဆိပ်ကမ်းနှင့် Shijiazhuang လေဆိပ်တို့နှင့်နီးသော Beijing-Tianjin-Hebei စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစက်ဝိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ပထဝီဝင်အနေအထားသည်သာလွန်။ သွားလာရေးအလွန်အဆင်ပြေသည်။
ကုမ္ပဏီသည်စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပေါင်းစည်းမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်။ SPC အခင်းများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် SPC အခင်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ စက်ရုံသည်ဧရိယာစတုရန်းမီတာ ၇၀၀၀၀ ကိုလွှမ်းခြုံ။ ၃ နှစ်ပြည့်စတုရန်းမီတာ ၃.၂ သန်းနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးနှင့်အတူ ထုတ်ကုန်များကိုအရှေ့ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အမေရိကနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ၄၀ ကျော်သို့တင်ပို့သည်။
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအရကုမ္ပဏီတွင် ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, FSC သစ်တောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ Formaldehyde ပါဝင်မှုနှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုတတိယအဖွဲ့အစည်းမှစစ်ဆေးသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာအရည်အချင်းများသည်ကုန်ကြမ်းများမှကုန်ချောထုတ်ကုန်များအထိဆက်ဆံရေးကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပြီးအမှတ်တံဆိပ်ဗျူဟာကို ဦး ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များရရှိစေသည်။
ကုမ္ပဏီသည် "ပထမတန်းစားစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလိုက်နာခြင်း၊ ပထမတန်းစားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပထမတန်းစား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း" ဟူသောအခြေခံမူကိုလိုက်နာသည်၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအမြဲလိုက်မှီသည်။ နိုင်ငံတကာနည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အညီအရှိန်မြှင့်ပါ၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်နှင့်ဒီဇိုင်းသဘောတရားများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုစနစ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ၊ ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုအတွက်ကြိုးစားပါ။
ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်၏ကြမ်းပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုတက်ကြွစွာမြှင့်တင်မြှင့်တင်ခြင်း၊ တရုတ်၏အမျိုးသားပြန်လည်ရှင်သန်မှုကိုအားပေးသည် စက်မှုအမှတ်တံဆိပ်
COVID-19 ကြောင့် ၂၀၂၀ မှစ၍ ဖောက်သည်များအားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များ၏အကြွေးထုတ်လုပ်သူများကိုလည်းအကြံပြုနိုင်သည်။
1. Skirting ထုတ်လုပ်သူ
2. PVC wallboard ထုတ်လုပ်သူများ
3. Mesh ခြံစည်းရိုးစက်ရုံ
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ ကြမ်းပြင်သည်အလွန်လေးလံသောကြောင့်ကွန်တိန်နာအတွင်းနေရာများစွာကိုကုန်စေသောကြောင့် ၀ ယ်သူများအားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ၎င်းကို 3D နောက်ခံပုံများဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်ပါကကွန်တိန်နာ၏အာကာသကိုထိရောက်စွာသုံးနိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးမှဖောက်သည်များအားကြိုဆိုပါသည်။ ဖောက်သည်များအားအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိစေရန်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုတက်ကြွစွာချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကူညီရန်အလွန်ရင်းနှီးသော၊ အကျိုးရှိပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအလုပ်သဘောထားကိုသုံးလိမ့်မည်။